बेपत्ता व्यक्ति खोजविनको अन्तिम तर जटिल चरणमा छौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / बेपत्ता व्यक्ति खोजविनको अन्तिम तर जटिल चरणमा छौं
बेपत्ता व्यक्ति खोजविनको अन्तिम तर जटिल चरणमा छौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता October 3, 2018	0 229 Views
बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका सदस्य
सशस् त्र द्वन्द्वकालमा बे पत्ता पारिएका व्यक्तिको खो जबिन गर्न सरकारले ०७१ सालमा बे पत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयो ग गठन ग¥यो  । तर आयो गले अहिले सम्म छानबिनलाई टुंगो मा पु¥याउन सके को छै न । आयो गले गठनपश्चात आवश्यक ऐ न, कानून, नियमावली, बजे ट, जनशक्तिको परिपूर्ति गर्न नसक्दा समस् या आएको बताइरहे को छ । सरकारले पनि तो किएको म्याद सकिएको आयो गको म्याद पुनः थपे र अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सहयो ग गरिरहे को छ । जसअनुसार अहिले आयो गले दाङलगायत तीन जिल्लामा विस्तृत छानबिन गरिरहे को छ । यसै सन्दर्भमा आयो गका सदस्य विजुल विश्वकर्मासग युगबो धकर्मी जे.एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
बेपत्ता नागरिकको अवस् था खो जबिन कहाँ पुग्यो  ?
बलपूर्वक बे पत्ता पारिएका नागरिकहरुको खो जबिन वा उनीहरुको अवस् था पत्ता लगाउने काम जति भन्दा सजिलो छ गर्दा साह्रै गाह्रो छ । त्यो कुरा पीडित परिवारहरुले पनि बुझिदिनुप¥यो  । आमनागरिक र सञ्चार माध्यमहरुले पनि बुझिदिनु प¥यो  । शान्ति सम्झौ ता भएको छ महिनाभित्र गठन गर्नुपनेर् आयो ग त्यसको साढे आठ वर्षपछि गठन भयो  । यस्तो ढिलाइले कतिपय प्रमाण हराउने , लुकाउने , बिर्सिन सक्ने खतरा छ । यति मात्रै हो इन, परिवारमा सन्तानलाई बलपूर्वक बे पत्ता पारे को दे ख्ने बाबुको अहिले मृत्यु भइसके को पनि हुनसक्छ । यस् ता समस् याले छानबिनको कामलाई थप जटिल बनाएको छ र पनि आयो गले पीडित परिवारबाट उजुरी लिने , उजुरीमाथि प्रारम्भिक कारवाही गनेर् , प्रारम्भिक छानबिन गनेर् काम सके र विस् तृत छानबिनसम्म पुगे का छौ ं । विस्तृत छानबिन अन्तरगत व्यक्ति बे पत्ता पार्नुपूर्व उसको अवस् थाको सूचना (एण्टीमो र्टम डाटा) लिने काम गरिरहे का छौ ं ।
यो करिव अन्तिम चरणमा पुगे को छ । ४३ जिल्लामा यो काम सकिसके को छ भने दाङ, बाके र कै लालीमा यो काम अहिले भइरहे को छ । के ही दिनमा यो सकिन्छ । आयो गमा हालसम्म तीन हजार एक सय ९७ उजुरी परे का थिए । ती मध्ये दुई हजार तीन ६९ वटा उजुरीमा विस् तृत छानबिन गनेर् आयो गले निर्णय गरे को छ भने अहिले त्यसको ५१ प्रतिशत उजुरीमा विस् तृत छानबिन गरिरहे को छ । त्यस् तै बे पत्ता आयो गको कार्यक्षे त्रभित्र नपनेर् तर हाम्रो मा आएका चार सय १४ वटा उजुरी हामीले सत्यनिरुपण तथा मे लमिलाप आयो गमा पठाएका छौ ं भने सत्यनिरुपणले हामीलाई पनि एक सय ३७ वटा उजुरी पठाएको छ । दुई सय ९० वटा उजुरी तामे लीमा राखिएको छ । जुन द्वन्द्वस‘ग असम्बन्धित र ०५२ दे खि ६३ सम्मको समयावधिभन्दा बाहिरका घटना हुन् । त्यस् तै एक सय १९ वटा उजुरी दो हो रो परे काले गाभिएको छ । बे पत्ता पारिएका व्यक्ति एउटै तर उजुरी परिवारका छुट्टा छुट्टै मान्छे ले दर्ता गराएको पाइएपछि हामीले एउटै मा गाभे का छौ ं ।
आयो ग ठ्याक्कै कहा पुग्या छ ?
छानबिनका तीनवटा चरण छन् । हामीले पहिलो र दो स्रो चरण पार गरिसके का छौ ं । अहिले अन्तिम र जटिल चरणमा छौ ं । उजुरी आइसके पछि उजुरीमाथि प्रारम्भिक कारवाही, त्यसपछि प्रारम्भिक छानबिन र अन्तिममा विस् तृत छानबिन गरिन्छ । हामी अहिले ते स्रो चरणको आधाउधी काम गरिसके का छौ ं । बा“की काम जस् तो कतै बे पत्ता पारिएका व्यक्ति मारे र गाडे को भए उसको शव उत्खनन, उत्खननपछि अस् िथपञ्जरस“ग एन्टिमो र्टम डाटा भिडाउने र सो अनुसार नभए डिएनए परीक्षण गनेर् काम गनेर् हो  । हामी अहिले एन्टिमो र्टम डाटा संकलनमै छौ ं ।
महत्वपूर्ण र जटिल काम त अझै बाकी रै छ त ?
हो , जटिल काम अझै बाकी छ । एन्टिमो र्टमबाट पत्ता लाग्न सके न भने डिएनए टे ष्ट गर्नुपर्छ । डिएनए गर्दा ने पाली प्रविधिले पत्ता लाग्ने अवस् था नभए विदे श पठाउनुपनेर् हुन्छ । विदे श पठाउदा चार/छ महिना पनि लाग्न सक्छ । त्यसै ले काम अन्तिम भए पनि जटिल छ ।
यही काम छिटो छरितो गर्न आयो गलाई के समस्या भो  ?
छानबिन प्रक्रियाका हिसाबले यो जटिल काम हो , मै ले माथि पनि भने ं । तीन चरणका छानबिन गरिएका छन् । हामी अन्तिम चरणमा छौ ं । अन्तिम चरणअन्तरगत पनि प्रारम्भिक काम एन्टिमो र्टम डाटा संकलन गनेर् , बकपत्र गराउने , परिपूरण फाराम भराउने काम गरिरहे का छौ ं । यो एउटा व्यक्तिलाई कम्तिमा दुई घण्टा लाग्छ । त्यति मात्रै हो इन बकपत्र, एन्टिमो र्टम लिइसके पछि करिव पीडक को हो  ? भन्ने प्रारम्भिक आकडा पनि आउछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई आयो गमा बो लाउने , बयान लिने , प्रमाण मिले कारवाहीका लागि सिफारिस गनेर् यी सबै प्रक्रिया झन्झटिला छन् । अझ पीडकहरुस“ग बयान लिने काम कति जटिल हो ला ? किनभने पक्कै पनि उहा“हरु पद र पावरमा हुनुहो ला । आयो गले पत्र काट्दा सहजै आउनुहो ला र ? समस् या छन् । तर गनैर् पनेर् छ ।
प्रक्रियागतरुपमा समय लाग्ला तर त्यही काम गर्न किन अलमल भयो आयो ग ?
आयो ग अलमल परे को हो इन । गठन भएदे खि आफ्ना काम निरन्तर गदैर् आएको छ । छानबिनका जति पनि प्रक्रिया छन् ती पूरा गर्नका लागि कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । हामीले मागे जतिको कर्मचारी पाएका छै नौ ं । विज्ञहरु पनि कम हुनुहुन्छ । पहिले आर्थिक समस् या थियो  । अहिले बजे ट त पठायो तर खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको स् वीकृति चाहियो  । जति बजे ट आउ“छ त्यसको एक खण्ड खर्च हुने बाकी दुईखण्ड फर्किने समस् या अहिले पनि छ । अकोर् कुरा, आयो ग नै ढिला गठन भयो  । गठन भइसके पनि आठ महिनासम्म पदाधिकारीले बस्ने कुर्सी पाएनौ ं ।
त्यसै बे ला दे शमा भूकम्प गयो  । त्यसले समस् या पा¥यो  । त्यसै मा छ महिना नाकाबन्दी लाग्यो  । जतिबे ला काम भन्दा ग्या“स, मट्टिते ल खो ज्न धाउनुप¥यो कर्मचारीहरुलाई । ती अप्ठे रा दिन सकिएपछि अब के ही गरौ ं त भन्नै लाग्दा दे शमा स् थानीय, प्रान्तीय र संघीय चुनाव लगातार भयो  । निर्वाचन आयो गले हाम्रा कर्मचारी समे त सबै थुते र लगिदियो  । हामी कर्मचारीविहीन भयौ ं । आयो गमा कार्यालय सहयो गी पनि नभएर समस् या परे को थियो  । त्यस् तै नियमावलीको मस् यौ दा गरे र सरकारलाई दियौ ं तर एक हप्तामा स् वीकृत हुने नियमावली १४ महिनापछि स्वीकृत भएर आयो  । नियमबिना काम गर्न त सकिदै न । तसर्थ अलमल भन्दा पनि के ही अवरो धले पीडितहरुले चाहे जसरी छिटो छरितो काम हुन नसके को हो  ।
अझै कति लाग्ला ?
हामीले अरु दे शको पनि अध्ययन गरे का छौ ं । एक÷दुईवटा दे शमा घुम्यौ ं पनि । द्वन्द्वमा फसे का झण्डै ४० वटा दे शको अध्ययन गर्दा भिन्न समस् या र मुद्दाका कारणले त्यहा“ द्वन्द्व सिर्जना भएको छ र त्यसमा बे पत्ता पारिएका नागरिकको खो जबिन र पीडित परिवारहरुलाई सम्बो धन गनेर् तरीका पनि अलग–अलग नै पायौ ं । त्यसै ले कतै २० वर्षसम्म छानबिन गरे र टुंग्याइएको छ भने सबै भन्दा छिटो तीन वर्ष लगाइएको छ । साउथ अफ्रिकाले सबै भन्दा छिटो टुंग्याएको छ तर सबै प्रक्रिया पु¥याएको छै न । त्यहा“को आयो गले के वल बे पत्ता भएका संख्या मात्रै पत्ता लगाउने काम ग¥यो  । घटनाका आरो पित र पीडक खो ज्ने काम गदैर् गरे न र सबै लाई आममाफी दिने काम ग¥यो  । तसर्थ यहा“ त्यो खालको काम हो इन हामीले त पीडित पत्ता लगाउने र कारवाहीका लागि सिफारिस गनेर् हो  ।
यस्तै गतिमा रहे यति समय लाग्ला भन्ने अनुमान हो ला नि आयो गको  ?
यस् तो हिसाबले काम गर्दा समय लाग्छ । यति नै लाग्छ भन्न सकिदै न । अस् िथपञ्जरको डिएनए टे ष्ट गर्न विदे श पठाउनु पर्ला । सबै का अस् िथपञ्जरको डिएनए टे ष्ट गर्दा पनि समय लाग्ला । यसर्थ तत्काल टुंगिन्छ भन्न सकिदै न ।
तत्काल टुंगिएन भने त आयो गको म्याद केही महिना मात्रै छ, म्याद थप्नुपनेर् हो ला ?
यो समस्या समाधान गनेर् हो । आयो गबाटै काम सम्पन्न गनेर् हो भने सरकारले विचार गर्ला । हो इन भने अहिले सम्म आयो गले जे जति काम गरे को छ त्यसै लाई पो को पारे र सरकारलाई बुझाएर विदा लिन्छौ ं ।
आयो गको म्याद थपिए त्यो अन्तिम हो ला ?
त्यो पनि भन्न सकिन्न । अहिले सम्म बे पत्ता सम्बन्धी कानून बने को छै न । ने पाल संयुक्त राष्ट्रसंघस“ग जो डिएको छ । पक्ष राष्ट्र हु“दा आफूखुशी पनि गर्न पाइ“दै न । जति काम भयो यति नै गरौ ं भनिहाले आयो गले के भन्ने हो र ?
पीडितले न्याय पाउलान् त ?
कतिपय पीडितहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा जानकारी नै छै न । प्रचलित कानून र नियमित अदालतबाट पाइने न्याय जस् तो हो इन । यो भिन्न परिस् िथतिबाट सिर्जित छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । जसरी कुनै व्यक्तिको हत्या ह“ुदा कसुरदारले अदालतबाट पाउने सजाय छ त्यो सजाय हुबहु यति हुन्छ भन्ने ह“ुदै न । यसमा अलिकति भए पनि सहुलियत हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो  । यो कुरा बुझ्नुपर्छ र ढिलो चा“डो पीडितहरुले न्याय पाउने कुरामा दुईमत छै न ।
तर आधार त दे खिदै न न्यायको  ?
बे पत्ता पारिएका नागरिकहरुको खो जबिन र बे पत्ता पानेर् हरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नका लागि आयो गलाई जसरी सवल र सक्षम बनाइनुपथ्योर् सरकारले गरे को छै न । जनशक्ति पनि पूरा छै न । विज्ञहरु कम हुनुहुन्छ । कानुन, ऐ न समयभित्रै आएन । आर्थिक समस् या पनि भइरह्यो भने प्रविधिको पनि समस् या भइनै रह्यो  । अघि पनि भनें व्यक्ति बे पत्ता पानेर् हरुलाई के कारवाही गनेर् भन्ने कानून नै नबन्दाखे री तपाइ“ले भने जस् तो आधार क्षीण भएजस् तो लाग्छ । तर ढिलो चा“डो यो काम सरकारले गनैर् पर्छ ।
त्यसो भए परिपूरण के दिन्छ राज्यले  ?
चार÷पा“चवटा व्यवस् थाहरु छन् । जस् तो पीडित परिवारहरुलाई निःशुल्क स् वास् थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा, आवास निर्माणका लागि पा“च लाख दिने । आवासकै लागि थप विना व्याज ऋणको व्यवस् था गनेर् । रो जगारीको व्यवस् था गरिदिने  । त्यस् तो अवस् था नभए स् वरो जगारको तालिम दिने र बे पत्ता नागरिकको नाममा परिवारले चाहे अनुसार जस् तो ः चौ तारी, प्रतीक्षालय, पुस् तकालय, स् कूलका कक्षा को ठा बनाइदिने । सडकहरुको नामाकरण गरिदिने , सामूहिक स् मारक बनाउने काम गरिन्छ ।
पीडित परिवारहरुले पे न्सन दिए हुन्थ्यो भने का छन् नि ?
हो यस् तो माग पनि छ । एकमुष्ठ दिदा सकिन्छ । पे न्सनको रुपमा दिए गुजारा चल्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर कतिपयले फे रि पे न्सन हो इन एकमुष्ट दिनुपर्छ भन्नुभएको छ । एकमुष्ट दिदा सानो तिनो व्यापार, व्यवसाय गरे र खान सकिन्छ भन्नुभएको छ । उहा“हरुको मागअनुसार हामीले सिफारिस गनेर् हो  ।
द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र चाहियो पनि भन्नु भएको छ, किन नदिएको  ?
उहा“हरुलाई द्वन्द्वपीडित परिचय पत्र दिने विषयमा हामी एक÷दुई महिनाभित्रै निक्यौर् ल गर्छांैर्  । आयो गको पूर्ण बै ठकबाट यसको निर्णय हुन्छ । परिचयपत्र चरण–चरणमा वितरण गनेर् हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागे को छ । छानबिन चलिरहे को छ । सो हीअनुसार प्राथमिकीकरण गरे र परिचयपत्र दिन सकिन्छ ।
पीडकलाई कारवाही होला ?
पीडकलाई कारवाही हुन्छ । तर प्रमाण जुट्नु प¥यो  । विनाप्रमाण कसै लाई पीडक सावित गर्न सकिदै न । प्रमाण जुटे ऊ कारवाहीको भागिदार हुन्छ ।
धम्की, प्रलो भनमा सिफारिस नै रो कदिन हुन्छ की तपाइहरुले  ?
धाक, धम्की, प्रलो भनले सिफारिस रो किदैन । आयो गले प्रमाणको आधारमा पीडक पहिचान गनेर् हो  । उसले कारवाही भो ग्नुपर्छ । कुनै द्विविधा छै न ।
Previous: यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाऊ
Next: ‘कोटा’मा उपचार